Naafada gacanta waxaa lagu meeleeyey Saldhigyada Nidaamka Tareenka ee Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraNaafada gacanta waxaa lagu meeleeyaa Saldhigyada Nidaamka Tareenka ee Ankara
20 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Gondola, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, TELPHER
Nadaafada gacmaha waxaa la dhigayaa saldhigyada tareenka ee Ankara
Iyada oo la eegayo baaxadda tallaabooyinka laga qaadayo cudurka 'coronavirus' ee Magaalada Ankara ee Magaalo Weyn, mashiinnada iibinta gacmaha lagu nadiifiyo waxay bilaabeen in lagu meeleeyo Metro, ANKARAY iyo Cable Car Stations. Waxyaabaha jeermiska ku jira ee dareemayaasha dareemayaasha ah waxaa lagu dhejin doonaa 100 dhibcood oo ah dalabka oo laga bilaabay Nidaamka Tareenka, oo ay muwaadiniintu si ballaaran u adeegsadaan tilmaamaha Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş.
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa dagaalka ay ku qaadayso la dagaallanka coronavirus (COVİD-19)
Ahmiyada la siinayo caafimaadka bulshada, Dowlada Hoose ee Magaalada waxay ku dartay mid cusub taxadarka iyo tilaabooyinka laga qaadayo Magaalada Caasimada ah ee looga hortagayo khatarta cudurada faafa iyo fayraska. Iyada oo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Mansur Yavaş, mashiinnada iibinta qalabka gacanta ee qalabka wax lagu rito ee qalabka iibiya ayaa bilaabay in lagu meeleeyo Metro, ANKARAY iyo Cable Car Stations.
SI loogu qoro 100 QODOBO OO AY KU SAABSAN YAHAY NIDAAMKA RAILADA
Mashiinnada iibka gacanta ee qalabka gacanta lagu iibiyo, oo lagu bilaabay in lagu rakibo xarunta la wadaago ee ANKARAY iyo Metro ee Kızılay, ayaa dhowaan la dhigi doonaa 43 dhibcood wadarta guud ee 11 mitir, 4 ANKARARAY iyo 100 Xarumo Gawaarida Cable ee Caasimadda.
Isagoo hoosta ka xariiqaya mashiinnada iibinta jeermiska gacma-dhaqashada ah in marwalba la hubin doono, wuxuu bixiyay macluumaadka soo socda:
Iyada oo la raacayo go'aamadii ay soo saareen Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka ee ay abuurtay tilmaamaha Duqa Magaalada Ankara Mudane Mansur Yavaş, waxaan ku ridi doonnaa unugyada jeermis-dileyaasha barta ay ku yaalliin saldhigyadayada si aan u ilaalinno caafimaadka muwaadiniinteenna adeegsada nidaamyada tareenka ee gaadiidka dadweynaha. Waxaan bilownay barashadayada mowduucan. Hawlaha kulanka ayaa lagu dhammeystiri doonaa dhammaan saldhigyadeenna sida ugu dhaqsaha badan. Rakaabkeenu waa safri karaan iyagoo gacmaha si xor ah ugu dilaacay gacmahooda.
XIRFADAHA KU SAABSAN CODSIYADA CUSUB
Eyyüp Dereli, oo qaba in makiinadaha wax lagu dilo ee lagu keydiyo metrooga metrooga ee loogu talagalay nadaafadda gacmaha ayaa ah codsi meesha yaal, ayaa yiri, "Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Duqa Magaalada Metro Mansur Yavaş tallaabadan. Codsi aad u fiican. Waxaan ku soo celin doonaa gadaal, waxaan isku dayi doonnaa inaan ka takhalusno cudurkan. Haddii aan qaadno tallaabooyinka noocaas ah, maalmahan si fudud ayaan uga gudbi doonnaa waddan ahaan ”.
Iyada oo shaqooyinka nadiifinta iyo nadaafadda ay ka sii socdaan Xarummaha Xargaha, ayaa muwaadiniinta adeegsada gaadiidka dadweynaha waxay fikradahooda ka dhiibteen shaqada ay Dawladda Hoose ka qabato caafimaadka dadweynaha ereyadan soo socda:
Yeliz İşitmir: Nadiifiyaha gacantu waa fikrad aad u wanaagsan. Isticmaalka jeermis-dileyaasha ayaa si fudud noo noqon kara raaxo. Waxaan rabaa in codsigan uu noqdo mid baahsan dhammaanba xarumaha rakaabka ee ay tahay in ay adeegsadaan tareenka dhulka hoostiisa. ”
Murat Erdoğan: Waa codsi aad u muhiim ah xagga caafimaadka. Waa lagama maarmaan in la haysto jeermis-dileyaashaan gaar ahaan meelaha caamka ah. Sidoo kale waa inay ahaataa guryaheena. Aad ayey ugu fiicneyd degmadeena inay qabtaan shaqadan. Waad ku mahadsan tahay dadkii gacan ka gaystay. ”
Günel Nasibova: "Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelinno Maamulka Magaalada Ankara ee Magaalaga Weyn ee tixgelineysa caafimaadkeenna iyo hirgelinta dalabkan."
Kamuran Baykal: “Aad ayaan ugu faraxsanahay Magaalada Metropolitan. Tani waa barnaamij aad u fiican iyo adeeg wanaagsan. Ugu yaraan, dadku waa ay ku faafi karaan gacantooda oo safri karaan iyagoon wax jeermis ah qaadin. "
Goobaha la xiray waxaa lagu dhajiyay Degmooyinka Diyarbakir
Bixinta cagaha gawaarida birta ee dahabiga ah!
Calaamadaha Digniinta taraafikada ayaa la dhigay Wadada Gedevet
Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Gaziantep Nidaamka tareenka wuxuu ku cusub yahay marxaladda 3aad…
Dhismaha Nidaamka Raadinta Nidaamka Raadinta Gaziantep Dhismaha iyo hubinta…
Dhismaha Mashruuca Tareenka Nidaamka Raadinta Dawlada Hoose ee Magaalada Gaziantep iyo…
1000 Lira Aid ayaa loo qaybin doonaa dadka u baahan